Yiba Uyilo lweMechanical-Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
I-Fumax Tech inikezela ngeenkonzo ezahlukeneyo zoyilo lobunjineli boomatshini.Singenza uyilo olupheleleyo loomatshini kwimveliso yakho entsha, okanye sinokwenza uhlengahlengiso kunye nophuculo kuyilo lwakho olukhoyo lomatshini.Sinokwanelisa iimfuno zakho zoyilo lomatshini kunye neqela leenjineli zoomatshini abanobuchule kunye nabaqulunqi abanamava abanzi kuphuhliso lwemveliso entsha.Amava ethu oyilo lomatshini woyilo lobunjineli aneendidi ezahlukeneyo zeemveliso, kubandakanya iimveliso zabathengi, izixhobo zonyango, iimveliso zamashishini, , iimveliso zonxibelelwano, iimveliso zothutho kunye nezinye iimveliso.
Sineenkqubo zangoku ze-3D ze-CAD zoyilo lomatshini, kunye nezixhobo ezahlukeneyo / izixhobo zokuhlalutya oomatshini kunye nokuvavanya.Indibaniselwano yethu yeenjineli ezinamava kunye nezixhobo zoyilo ivumela iFumax Tech ukukuzisa uyilo lomatshini olulungiselelwe ukusebenza kunye nokwenziwa.
Isixhobo sesoftware esiqhelekileyo: Pro-E, iMisebenzi eqinileyo.
Ifomathi yefayile: inyathelo
Inkqubo yethu yophuhliso loomatshini ibandakanya la manyathelo alandelayo:
Sisebenza kunye nomxhasi wethu ukugqiba iimfuno zoomatshini kwimveliso ethile okanye inkqubo.Iimfuno ziquka ubungakanani, iimpawu, ukusebenza, ukusebenza, kunye nokuqina.
2. Uyilo loShishino (ID)
Inkangeleko yangaphandle kunye nesitayela semveliso ichazwe, kubandakanywa nawaphi na amaqhosha kunye neziboniso.Eli nyathelo lenziwa ngokuhambelana nophuhliso loyilo lomatshini.
3. Uyilo lweMechanical
Siphuhlisa umgangatho ophezulu wokwakhiwa komatshini kwimveliso (s).Inani kunye nohlobo lwamacandelo oomatshini achazwe, kunye nojongano kwiiBhodi zeSekethe eziprintiweyo kunye nezinye iindawo zemveliso.
4. Ubume beCAD obungoomatshini
Senza uyilo oluneenkcukacha lomatshini kwindawo nganye yomatshini kwimveliso.Uyilo lwe-3D MCAD ludibanisa zonke iinxalenye zoomatshini kunye nee-electronic subassemblies kwimveliso.
5. Indibano yePrototype
Emva kokuba sigqibe uyilo lomatshini, iinxalenye zeprototype zoomatshini zenziwe.Amalungu avumela ukuqinisekiswa koyilo lomatshini, kwaye la malungu adityaniswa ne-electronics ukwenza iprototypes esebenzayo yemveliso.Sinikezela ngokukhawuleza ukuprintwa kwe-3D okanye iisampulu ze-CNC ngokukhawuleza njengeentsuku ezi-3.
6. Uvavanyo lomatshini
Amalungu oomatshini kunye neeprototypes zokusebenza ziyavavanywa ukuqinisekisa ukuba ziyahlangabezana neemfuno ezifanelekileyo.Uvavanyo lokuthotyelwa kwe-arhente luyenziwa.
7. Inkxaso yemveliso
Emva kokuba uyilo lomatshini luvavanyiwe ngokupheleleyo, siya kudala ukukhutshwa koyilo lomatshini kwi-Fumax izixhobo / iinjineli zokubumba ukwenza ukubumba, ukuqhubela phambili imveliso.Sakha izixhobo / umngundo endlwini.
IPcb Fabrication kunye neNdibano IRigidFlex Pcb IPcb enamacala amabini IFlex PC Odm PCba Ibhodi yeSekethe eprintiweyo